‘काँग्रेस बीआरआईमा जान्छ, चीन ढुक्क भए हुन्छ’ | Ratopati
‘काँग्रेस बीआरआईमा जान्छ, चीन ढुक्क भए हुन्छ’
जस्तोसुकै परस्थितिमा पनि सभापति लड्छु : डा. शेखर कोइरालासँगको अन्तरवार्ता
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १७, २०७६ chat_bubble_outline2
सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षीको बेञ्चमा रहेको नेपाली काँग्रेस पनि आलोचनारहीत हुन सकेको छैन । पार्टीभित्रको अस्तव्यस्तता र संसदमा ‘फितलो’ प्रस्तुतिका कारण काँग्रेस आलोचित बनेको हो । त्यतिमात्रै होइन, जनजीविकाका सवालमा पनि काँग्रेसले सशक्त आवाज उठाउन नसकेको काँग्रेकै नेताहरु बताइरहेका छन् । पार्टीभित्रको अस्तव्यस्ता, १४ औंँ महाधिवेशन, अंगीकृत नागरिकता र सी विचारधाराको सेरोफेरोमा रहेर नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालासँग रातोपाटीका लागि लोकेन्द्र भट्टले कुराकानी गरेका छन् ।
मुलुकका पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई कसरी अध्ययन गरिरहनुभएको छ ?
अहिलेको नेपालको राजनीति अध्ययन गर्दा देशभित्र र बाहिरको राजनीति समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । देशभित्रको राजनीतिमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ । सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु गर्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि ल्याउनुपर्ने विधेयकहरु पनि ल्याउन सकेको छैन । ल्याएका विधेयकहरु पनि विवादित छन् । गुठी विधेयक हचुवाको तालमा ल्याइयो र फिर्ता भयो । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादमा छ । यो विधेयक पास भयो भने तपाईं हामी यसरी बसेर छलफल गर्न पनि पाउँदैनौ । यसमा नेकपानिकट सञ्चारकर्मीले पनि बुझ्नुपर्ने हो कि ‘हामीमाथि तरबार झुन्ड्याइँदै छ’ भनेर । भलै पछि काँग्रेस सरकारमा आए यस्ता ऐन–कानुनहरु संशोधन गर्ला । तर त्यतिबेलासम्म देश अप्ठ्यारोमा परिसकेको हुनेछ । मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि विवादमा छ । अहिले आएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने मानवअधिकारको नेपालमा कुनै मान्यता रहँदैन । किन भने यो स्वतन्त्र निकाय हो, संविधानले नै यसको स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ । तर सबैभन्दा गम्भीर विधेयक भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक हो । यो जस्ताको तस्तै पास भए देशमा एक दलीय शासन व्यवस्था ल्याउन कसैले रोक्न सक्दैन । किनभने प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्नेछन् ।
अर्कोतिर सरकारका क्रियाकलाप उदण्ड मच्चाउने खालका छन् । राज्य आतङ्कको शैलीमा काँग्रेस बाँकेका सभापति ७० वर्षीया किरण कोइरालामाथि वडाध्यक्षकै नेतृत्वमा हात भाँचिदिने काम भएको छ ।
यस्तै तनहुँमा नेता डा. मिनेन्द्र रिजालमाथि सामूहिक हमला गर्ने प्रयास भएको छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्तामाथि गाडीभित्रै रडले हिर्काउने काम भएको छ । के हामीले यसैका लागि आन्दोलन गरेका हौँ ? त्यसैको लागि गणतन्त्र ल्याएका हौँ ? गणतन्त्रमा त बोल्ने अधिकार हुन्छ तर अहिले देशमा गुण्डागर्दी राज फैलिएको महसुस भएको छ । जसले अधिनायकवादको संकेत गरिरहेको छ ।
सरकारका यस्ता कदम रोक्न काँग्रेसको प्रयास के हुनसक्छ ?
काँग्रेस कार्यकर्तामा जागरुकता ल्याउन लागिपरेको छ । निर्वाचनमा हार बेहोरेपछि हाम्रा कार्यकर्तामा एक खालको निरासा पैदा भयो । अर्कोतिर संसदमा हामीले सुरुका दिनमा आवश्यक भूमिका खेल्न सकेनौँ । अहिले पनि त्यति राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेका छैनौँ । काँग्रेस सडकमा आउने कुरा हुँदैन । तर सडकमा आउने नेविसंघ विघटन भएको ७ महिना भइसक्यो । तरुण दलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अरु भ्रातृ संस्थाहरु कसैको अवधि सकिएको छ भने कसैले काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण हामीले सडक तताउन सकिरहेका छैनौँ । तर पनि काँग्रेस सचेत छ । अब काँग्रेस सडकमा उत्रन तयार हुनुपर्छ ।
राजाको निरंकुशताका विरुद्धमा पनि काँग्रेस सडकमा उत्रिएकै हो । यो सरकारले पनि निरंकुशता लाद्न खोजिराखेको छ, हामी यसविरुद्ध पनि उत्रिन्छौँ ।
दुःखको कुरा जसलाई म हिजोदेखि आदार गर्छु हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । जो लोकतन्त्रको निम्ति १४ वर्ष जेल बस्नुभयो । त्यो के एकदलीय शासन व्यवस्था ल्याउन हो ? हो भने उहाँले भन्नुपर्यो । होइन, यी गलत कामहरुलाई रोक्नुपर्यो ।
निरंकुशताविरुद्ध लडेका नेता वा पार्टीले नै सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट बनेको सरकार निरंकुश बन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
मैले अंकुश लगाउने कुराका बारेमा सुरुमै बताएँ । एक दलीय शासन व्यवस्थाको बाटोमा सरकार गएको छ । तर नेपालको संविधानले एक दलीय व्यवस्थालाई चिन्दैन । तैपनि उहाँहरुले गरिराख्नु भएको छ । जसका विरुद्ध पत्रकार, नागरिक समाज र हामीहरु लागिरहेका छौँ । गलत हो भनिरहेका छौँ । उहाँहरुको अल्टिमेट गोल के हो ? उहाँहरु कम्युनिस्ट हो । यसमा दुई मत छैन । कम्युनिस्टको सिद्धान्त नै एकदलीय राज्य व्यवस्था हो । पछिल्लो समय सत्तारुढ दलको क्रियाकलाप हेर्दा ऊ त्यसतर्फ नै उद्दत छ ।
दुःखको कुरा जसलाई म हिजोदेखि आदार गर्छु हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । जो लोकतन्त्रको निम्ति १४ वर्ष जेल बस्नुभयो । त्यो के एकदलीय शासन व्यवस्था ल्याउन हो ? हो भने उहाँले भन्नुपर्यो । होइन, यी गलत कामहरुलाई रोक्नुपर्यो । उहाँसँग ठूलो आशा थियो–अब देश समृद्ध हुन्छ भनेर । तर उहाँ विकास र समृद्धी भन्दा पनि एकदलीय शासन व्यवस्थातर्फ लाग्नुभयो । नेपालमा एकदलीय शासन व्यवस्था लाद्न काँग्रेसले दिँदैन ।
सरकारले एक दलीय शासन व्यवस्था रोक्न काँग्रेसले ल्याकत राख्ला ?
कुनैपनि संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलका नेताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको नेता अहिले सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । उहाँले गर्ने गतिविधि र उठाएका विषयमा पार्टीका सांसद र हामी कार्यकर्ताले अनुशरण गर्ने हो । तर काँग्रेसमा त्यस्तो भइरहेको छैन । केही सांसदहरुले बोलिराख्नु भएको छ । केही भएको छैन भन्ने पनि होइन । तर त्यसले जति अर्थ राख्नुपर्ने हो त्यति छैन भन्नेमात्र हो ।
महाधिवेशन भएको २ महिनामा पार्टी विभाग गठन भइसक्नुपर्ने विधानमा छ । तर साढे तीन वर्षसम्म पनि विभाग बन्न सकेका छैनन् । त्यसमा को जिम्मेवार हो ? भागबण्डाको कुरा मेरो सरोकारको विषय होइन । अहिलेसम्म विभागसमेत गठन हुन नसक्नुमा मुख्य जिम्मेवार को हो ? त्यसको निम्ति सभापति जिम्मेवार होइन ? मैले पठाएँ उनीहरुले नाम दिएनन् भनेर रोइलो गर्ने हो ? विधानतः अब अधिवेशनमा जाने बेलामा विभाग बनाउने हो कि पहिले नै हो ?
प्रतिपक्षको भुमिका त कमजोर नै देखियो । काँग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति चाहीँ कसरी चल्दैछ ?
हालको केन्द्रीय समितिको कार्यकाल चार वर्षको हो । पार्टी विधान अनुसार एक वर्ष थप्न सक्छौँ । संविधानले पनि ६ महिना समय थप्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हामी प्रतिपक्षमा छौँ । कुनै प्रदेशमा पनि हाम्रो सरकार छैन । त्यसैले हामीले जतिछिटो अधिवेशन गर्यो त्यति नै छिटो काँग्रेसमा उर्जा थपिन्छ । तदर्थवादबाट पार्टी चलाउनु हुँदैन, चल्दैन । त्यसकारण मैले भन्ने गरेकोे छु – प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी गरौँ । यस्तै जुन जुन भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन हुन सकेको छैन । उनीहरुलाई महाधिवेशनतर्फ लगेपछिमात्रै काँग्रेस बलियो हुन्छ ।
तपाईंले १४ औँ महाधिवेशनको कुरा उठाइहाल्नुभयो । सभापति देउवाले तपाईंहरुलाई भागबण्डाको राजनीति गरेर पार्टीलाई बन्धक बनाउनुभयो भन्ने आरोप लगाइराख्नु भएको छ । के त्यस्तै भइरहेको हो ?
म पार्टी सभापतिले के भन्नुभयो भन्ने कुरामा जान्न । महाधिवेशन भएको २ महिनामा पार्टी विभाग गठन भइसक्नुपर्ने विधानमा छ । तर साढे तीन वर्षसम्म पनि विभाग बन्न सकेका छैनन् । त्यसमा को जिम्मेवार हो ? भागबण्डाको कुरा मेरो सरोकारको विषय होइन । अहिलेसम्म विभागसमेत गठन हुन नसक्नुमा मुख्य जिम्मेवार को हो ? त्यसको निम्ति सभापति जिम्मेवार होइन ? मैले पठाएँ उनीहरुले नाम दिएनन् भनेर रोइलो गर्ने हो ? विधानतः अब अधिवेशनमा जाने बेलामा विभाग बनाउने हो कि पहिले नै हो ? यसको अर्थ महाधिवेशन गर्न नचाहेको त उहाँले नै हो भन्ने प्रष्ट छ । अहिले भर्खर विधान अनुसार प्रतिनिधि, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेको छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृवको तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमसँग पनि समायोजन भइसक्यो । क्रियाशील सदस्यलाई कसरी अगाडि बढाउने र नविकरण गर्दा कसरी गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्ने बेलामा विभाग बनाउँछु भनेर हिँड्ने हो ?
गच्छदारसँगको समायोजनलाई लिएर कोइराला परिवार असन्तुष्ट बन्यो भन्ने छ, त्यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ?
मेरो कुनै असन्तुष्टि छैन । अरुको कुरा मलाई थाहा छैन । म सुरुदेखि नै समायोजन छिटो हुनुपर्छ भन्ने मान्छे । जुन दिन गच्छदारजी काँग्रेसमा समाहित हुुनुभयो त्यो दिनदेखि म समायोजनको पक्षमा छु । पार्टीले बनाएको समायोजन समितिले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ । यसलाई सबैले मान्नुपर्छ ।
वर्तमान कार्यसमितिले काम गर्न नसकेको गुनासो रहेकाबेला १४ औँ महाधिवेशनबाट काँग्रेसमा कस्तो रुपान्तरण हुने देख्नुहुन्छ ?
लोकतन्त्रका लागि हाम्रो नेतृत्वले धेरै हण्डर खायो । धेरै लडाईँ लड्नुपर्यो । त्यसका लागि नेताहरु सबैलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ । तर अबको दुईतिहाइ सरकारसँग लड्न सक्षम काँग्रेस बन्नुपर्छ । अबको काँग्रेस प्रविधिसँग अन्तरघुलित हुनसक्नुपर्छ । त्यसैले शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल बस्नुहुन्छ, हुन्न त्यो उहाँहरुको कुरा हो । हामीसँग चुनाव लडेर जित्नुभयो भने पनि अभिभावक मान्ने हो हारे पनि मान्ने हो । तर अब काँग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आउँछ आउँछ । हामी २१ औँ शताब्दीको समय सुहाउँदो काँग्रेस बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।
तपाईं २१ औँ शताब्दीको काँग्रेस बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ । तर काँग्रेसका अहिलेका नेताहरु नै नेतृत्वमा जान दौडधुप चलेको छ । फेरि यिनै नेता नेतृत्वमा पुगे भने तपाईंले कल्पना गरेको काँग्रेस सम्भव छ ?
लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको उदाहरण हेर्नुहोस् । युवा पुस्ताले उछिनेर आएका छन् कि छैनन् ? त्यसकारण त्यो कुरामा नजाऊ । उहाँहरुले पार्टीमा योगदान गर्नुभएको छ । उहाँको कदर गर्नुपर्छ । तर अब काँग्रेसको नेतृत्व उहाँहरुबाट सम्भव छैन यो पक्का हो ।
अब पदाधिकारी पनि युवा नै आउँछन् । युवालाई माइनस गरेर जान्छु भनेर अब हँुदैन । मैले पनि जोडेरै जानुपर्छ, अर्कोले पनि जोडेरै जानुपर्छ । अब नयाँ र प्रतिस्पर्धी नेतृत्व आउँछ । त्यो युवाको साथमा आउँछ । १५ औँ महाधिवेशनमा युवा पुस्ता नेतृत्वमा पुग्छ । युवाहरुकै लागि बाटो छेक्ने काम मबाट हुँदैन । अरुले पनि गर्नुहुदैन ।
देउवा पौडेलहरुबाट काँग्रेस नेतृत्व सम्भव छैन भन्दै गर्दा काँग्रेसका युवा नेताहरु पनि वैचारिक बहस र विचारमा सशक्त देखिँदैनन् नि ?
तपाईंले ठीक भन्नुभयो युवामा त्यस्तै अवस्था छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने युवाहरु मात्र होइन हामी सबै त्यस्तै छौँ । तर काँग्रेस यस्तो पार्टी हो जसले युवालाई पनि समावेश गर्छ । पाका नेताहरुलाई पनि लिएर जान्छ । पाका र युवाहरुको समिश्रणबाट काँग्रेस अघि बढ्छ ।
पाका र युवालाई संयोजन भन्नाले कसरी बुझ्ने ? तपाईं आफु युवा पुस्तालाई साथमा लिएर नेतृत्व गर्नु खोज्नुभएको हो ?
तपाईं यसरी बुझनुहोस् । अब पदाधिकारी पनि युवा नै आउँछन् । युवालाई माइनस गरेर जान्छु भनेर अब हँुदैन । मैले पनि जोडेरै जानुपर्छ, अर्कोले पनि जोडेरै जानुपर्छ । अब नयाँ र प्रतिस्पर्धी नेतृत्व आउँछ । त्यो युवाको साथमा आउँछ । १५ औँ महाधिवेशनमा युवा पुस्ता नेतृत्वमा पुग्छ । युवाहरुकै लागि बाटो छेक्ने काम मबाट हुँदैन । अरुले पनि गर्नुहुदैन ।
१४ औँ महाधिवेशनमा तपाईंको स्थान वा उम्मेद्वारी कुन पदका लागि हो ? गृहकार्य कसरी हुँदैछ ?
कार्यकर्तासित भेटघाट हुँदैछ । जिल्ला–जिल्ला जाँदैछु । उनीहरुको दुःखमा सामेल भइरहेको छु । उनीहरुको समस्या बुझ्ने प्रयास गर्दैछु । समस्या बुझेर समाधान गर्ने कोशिस गरिरहेकै हुन्छु । राजनीति भनेकै यहि त हो । देशभित्र र बाहिर जुन इस्यु आइरहेका छन् तिनलाई नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तामा सुझाउने प्रयास गरिरहेको छु । नेपाल अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ र हामी यसरी जाँदैछौ भनेर भनिरहेकै हुन्छु ।
यो कुरा तपाईं केन्द्रीय सदस्यका हिसाबले पनि गर्न सक्नुहुन्छ । तर यो पद भन्ने भित्रि आकाङ्क्षा पनि त होला नि ?
राजनीति गर्ने मान्छेमा उच्च पदको आकाङ्क्षा हुन्छ नै । गाउँपालिकाको मानिसलाई गाउँपालिका सभापति भन्ने आकाङ्क्षा हन्छ । जिल्लाको मान्छेलाई जिल्ला सभापति बन्ने भन्ने हुन्छ । प्रदेश र केन्द्रको कुरा पनि त्यस्तै हो । म केन्द्रमा छु केन्द्रीय नेतृत्व गर्ने इच्छा राख्नु स्वभाविक हो । यस्तै इच्छा सबैको हुन्छ । त्यसैले कोशिस गर्दैछु, भिड्दै छु, अगाडि जाँदैछु कतिसम्म अगाडि जान्छु त्यो समयले बताउँला ।
संस्थापन इतरतिर आधादर्जन नेताहरु साभापतिका आकाङ्क्षी छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंको सम्भावना कति होला ?
मेरो सम्भावना मैले भन्ने होइन । कार्यकर्ता र मेरो कर्मले बताउँला । कार्यकर्ताले साथ दिएको खण्डमा परिस्थिति जस्तोसुकै आएपनि मेरो सभापतिमा उम्मेदवारी रहन्छ । आज यति नै भनौँ । तपाईंले संस्थापन र संस्थापन इतरका आकाँक्षीको कुरा गर्नु भयो । म संस्थापन वा इतर भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिन । मान्छे कर्मले अगाडि बढ्ने हो । कति आकाङ्क्षी छन् भन्ने कुराभन्दा पनि जसले कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्नसक्छ उही नेतृत्वमा आउँछ ।
काँग्रेसको नेतृत्व लिन तपाईंले कस्ता रोडम्याप बनाउनुभएको छ ? योजना र एजेण्डा के छन् ?
अहिले नै त्यस्ता योजना र एजेण्डा तयार भैसकेका छैनन् । गर्ने बेला आउँला । सभापतिमा उम्मेद्वारी दिँदै गर्दा ती कामहरु गरेर अगाडि बढ्छु ।
तपाईं वर्तमान कार्यसमितिमा पनि हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म कुनै एजेण्डा स्थापित गर्ने वा कुुनै विचार–बहसको विजारोपण गर्ने काम हुन सकेको छैन । तपाईंको उम्मेद्वारीले काँग्रेस पुनर्ताजगी आउनेमा कसरी विश्वास गर्ने त ?
तपाईंले भनेको ठीक हो । हामीबाट पनि एजेण्डा स्थापित गर्ने र विचार वा बहसको विजारोपण गर्ने काम भएको छैन । तर काँग्रेस एउटा व्यक्तिले मात्र चलाएर चल्दैन । आज जो जो नेतृत्वमा हुनुुहन्छ, भोलिका दिनमा उहाँहरुको पनि हामीलाई सहयोग चाहिन्छ । पार्टी युवाको जोस् र पाकाको होस्लाई मिलाएर जाने हो ।
काँग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ र महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउँछ । आधार विधि र विधान नै हो । पार्टी विधि विधानबाट चल्यो भने सबै कुरा सम्भव छ । विपी कोइरालाले दिएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको सिद्धान्त अमर छ ।
पार्टीले सुरु गरेको अनुशासनको कारबाहीलाई कसरी लिनुभएको छ । तपाईं र पार्टी सभापतिविरुद्ध नै उजुरी परेको छ ?
अनुशासनको कारबाही हुनुपर्छ । पार्टीलाई छाडा छोड्नुहुँदैन । अनुशासनको नाममा यसले मलाई दुःख दियो, यसलाई सिध्याइदिऊ भनेर भन्नुहुँदैन । कति ठाउँमा त्यो देखिएको छ । अर्को कुरा मेरोविरुद्ध उजुरी परेको मलाई थाहा छैन । परेका भए पत्र आउला । त्यसमा चिन्ता गर्ने विषय छैन ।
काँग्रेसको पुनर्ताजगी कति सम्भव छ र त्यसको आधार के हुनसक्छ ?
पुनर्ताजगी हुन्छ । काँग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ र महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउँछ । आधार विधि र विधान नै हो । पार्टी विधि विधानबाट चल्यो भने सबै कुरा सम्भव छ । विपी कोइरालाले दिएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको सिद्धान्त अमर छ । हामी कम्युनिस्ट नेताहरुको जस्तो लोकप्रिय नारा दिएर जित्न खोज्दैनौँ । कम्युनिस्टहरु चुनावका बेला उग्रराष्ट्रवादका नारा दिन्छन् । हामी अति राष्ट्रवाद कुरा गर्दैनौँ । हामी उत्तरतिर पनि ढल्किदैनौँ, दक्षिणतिर पनि ढल्किँदैनौँ, हामी नेपालतिर ढल्किन्छौँ ।
तपाईंले सिद्धान्तको कुरा गर्नु भयो । तर काँग्रेस नेताहरु नै सिद्धान्त र विचारमा प्रष्ट देखिँदैनन् । तपाईंहरुले भन्दै गरेको समाजवाद र कम्युनिस्टहरुले भन्दै गरेको समाजवादमा फरक के छ ?
कम्युनिस्टको समाजवाद र काँग्रेसको समाजवाद फरक छ । हामी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता केन्द्रमा राखेर समाजवादको कुरा गर्छौँ, जान्छौँ । साथै कानुनी राज्य हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो । कम्युनिस्टहरु यो कुनै पनि कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् ।
नेपालका कम्युनिस्टले त तपाईंले भनेका सबै कुरा स्वीकार्दै आएका छन् नि ?
पहिले हरेक कम्युनिस्ट मुलुकमा बन्दुकको बलबाट एकदलीय शासन व्यवस्था आउँथ्यो । तर अब एकदलीय शासन व्यवस्था निर्वाचनबाट आइरहेको छ । पपुलिस्ट नारा दिएर आउँछ, जसरी यो सरकार आयो । अहिलेको सरकारका क्रियाकलाप हर्नुहोस् कानुनी राज्य कहाँ छ ? न्यायपालिकमाथि तरबार झुन्ड्याइएको छ । शक्तिपृथकीकरण छैन ।
काँग्रेस एजेण्डाविहीन भएको भन्ने आवाज प्रशस्त सुनिन्छ । अर्कोतर्फ आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानको विरुद्धमा धर्मनिरपेक्षताबिरुद्ध उत्रियो भन्ने पनि सुनिन्छ । यस्तो अवस्था किन आयो ?
नेपाली काँग्रेस उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ । हामीलाई एकदलीय शैली मान्य छैन । नेताले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन । काँग्रेसभित्र ठूलो तप्का छ–जो हिन्दुराज्य हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । तिनीहरुलाई सम्झाउनुपर्छ । आफ्नो विचार सबैले राख्न पाउँछन् । काँग्रेस र कम्युनिस्टमा फरक नै यही हो ।
तपाईंले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै हिन्दु राज्यको विषय १४ औँ महाधिवेशनमा जबरजस्त उठ्छ भन्नुभयो । त्यसको नेतृत्व गर्न तपाईं तयार हो ?
यो विषय जबरजस्त उठ्छ भन्नेमा दुईमत छैन । महासमिति बैठकमा ५० प्रतिशत साथीहरुले पार्टी विधानमा हिन्दुराज्य लेख्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यसैले पनि यो कुरा महाधिवेशनमा उठ्छ भनेको हुँ । त्यसमा नेतृत्व अहिलेनै सचेत भएर लाग्नुहोस् साथीहरुलाई सम्झाउनुस् भनेको हो ।
त्यसो भए हिन्दु राज्यको विषय दबाउन नेतृत्वलाई सुझाउनु भएको हो ?
संविधानको पालन राज्यले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सनातनदेखि चलिएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने संविधानमै भनिएको छ । प्रधानमन्त्री होलीवाइन खान जानुहुन्छ । संविधानले गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर भनेर भनेको छ, गौवध भइरहेको छ । प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ । सरकार मौन छ । यो राज्यले रोक्नुपर्दैन ? सरकारकै व्यवहारका कारण यस्तो आवाज उठेको हो ।
एक प्रतिशत भन्दा कम अङ्गीकृत नागरिकता लिएकाबाट के राष्ट्रियता खतरामा पर्नु ? राष्ट्रियता त हामीले खतरामा पारेको छौँ, जो वंशजको आधारमा नागरिकता दिएका छौँ । कोही चीनतिर ढल्केको छ, कोही अमेरिकारलिर ढल्केको छ, कोही भारततिर ढल्केको छ । त्यस्ताहरुबाट राष्ट्रियता खतरामा छ । विहेर गरेर आएकी बुहारीबाट राष्ट्रियता खतरामा देख्नेहरुले संकीर्ण सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ ।
काँग्रेस अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधान–२०६३ मा किन फर्कियो ?
नेपालको भूवनोटलाई ध्यानदिनुपर्छ । ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि नागरिकता बाँड्यौ । त्यतिबेला ३० लाख ४० लाखले नागरिकता पाए भन्ने हल्ला फैलाइयो । तर २६ लाख ४० हजारले मात्र नागरिकता पाएका हुन् । त्यसमा १३ लाख हिमाल, पहाडबाट वंशजको नाताले नागरिकता पाए । १२ लाखले तराई र मधेसबाट पाए । जसमा १ लाख ४० हजारले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाए । नागरिकताका विषयमा हामी दक्षिणको कुरामात्र गर्छौँ । तिब्बतीयनले नेपाली नागरिकता लिएका छन्–छैनन् भनेर हामीले सोच्यौँ ? यस्तै असाम, मेघालय, सिक्किम, दार्जेलिङबाट नेपाली भाषीले पनि नेपाली नागरिकता लिएका छन् होला । नेपालमा जनगणना सुरु भएदेखि १ प्रतिशत भन्दा कमले मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता लिएको तथ्याङ्कले भन्छ । हामी नबुझेर त्यतिकै बहकिनुहुँदैन । काँग्रेस यस्ता सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर अन्तरिम संविधान ०६३ मा फर्किएको हो । अंगीकृत नागरिकताको विषयमा लैङ्गिक समानताको कुरा पनि जोडिन्छ त्यसमा महिला र पुरुषले समानअधिकार पाउनुपर्छ ।
बुहारीको चिन्ता गर्नेले छोरीको चिन्ता किन नगरेको भनेर तपाईंहरुको यो तर्कमाथि प्रश्न उठाइँदै छ नि ?
विभिन्न देशमा आ–आफ्नै नियम कानुन हुन्छन् । हामीले आफ्नु कानुन बनाउने हो । भारतमा, चीनमा, अमेरिकामा, बेलायतमा र पाकिस्तानमा के नियम छ भनेर त्यही अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हामीलाई छोरीको चिन्ता छ, नभएको होइन । उहाँहरु भारतको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ । अमेरिकाको कुरा किन गर्नुहुन्न ? अन्य देशले के गर्छन् भन्ने होइन । नेपालमा समान हुनुपर्यो ।
नागरिकताको विषयमा काँग्रेसको यो अडानले राष्ट्रियता कमजोर हुने कतिपयको तर्क छ नि ?
यसको समाधानको उपाय के देख्नु भएको छ ?
नेपाली महिलासित विदेशी पुरुषले विहे गर्छ भने वा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासित विहे गर्छ भने पनि समान अधिकार दिऔँ । त्यसका लागि अमेरिकाको ग्रीनकार्ड वा अस्ट्रलियाको पीआर भनेजस्तै यहाँ पनि त्यस्तो परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ५/७ वर्षजति दिने हो भने महिला पुरुष दुवैलाई दिनुपर्यो । अनि ५/७ वर्षपछि उनीहरुलाई राजनीतिक र नागरिकताको अधिकार पनि दिने व्यवस्था मिलाउँदा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा बुहारी र ज्वाइँलाई समान अधिकार हुने भयो । यो प्रचनल विश्वका विभिन्न देशले पनि अङ्गिकार गरेको पाइन्छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखले नेकपाका साथीहरुलाई सी विचारधाराबारे प्रशिक्षण दिनुभयो । त्यो दिनुपथ्र्यो वा पर्दैन थियो म त्यतातिर जान्न । कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो होला, राम्रा कुरा सिक्लान् त्यसमा मेरो केही भन्नुछैन । नेपालमा संसदीय व्यवस्था छ । त्यहाँ एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था छ । सी विचारधारा यहाँ लाद्न खोज्नुभयो भने नेकपा सकिन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ विचारधाराबारे नेकपाले प्रशिक्षण लिएको विषयलाई काँग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको देखियो । तपाईं भर्खरै चीनबाट फर्किनुभएको छ । यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखले नेकपाका साथीहरुलाई सी विचारधाराबारे प्रशिक्षण दिनुभयो । त्यो दिनुपथ्र्यो वा पर्दैन थियो म त्यतातिर जान्न । कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो होला, राम्रा कुरा सिक्लान् त्यसमा मेरो केही भन्नुछैन । नेपालमा संसदीय व्यवस्था छ । त्यहाँ एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था छ । सी विचारधारा यहाँ लाद्न खोज्नुभयो भने नेकपा सकिन्छ । नेपाल पनि धरापमा पर्नसक्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था छ । यहाँ संसदीय व्यवस्था अनुसार विकासको मोडेल अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । एकदलीय व्यवस्था नै ल्याउँछाँै भनेर संविधान नै संशोधन गर्न खोज्यो भने उहाँहरुसँग हामी भिड्छौँ । सी जिनपिङ चीनको राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार कम भयो । प्रशिक्षणमा पनि भ्रष्टाचार निवारणका लागि उहाँहरुले के सिक्नुभयो त्यो उहाँहरुले नै भन्नुपर्छ ।
अर्को कुरा म चीनबाट भर्खर आएँ । त्यहाँ जलवायु परिवर्तन, ट्रान्स बाउन्ड्री वाटर गर्भनेन्सका विषयमा छलफल भएको थियो । अबको लडाइँ पानी र धर्मको लडाइँ हुन्छ भन्ने चारैतिर चर्चा छ । पानीको लडाइँमा गङ्गा, ब्रम्हपुत्र, मेघना नदीको पानीको कुरा छ । त्यसमा कहिँकतै यताउति भयो भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्नसक्छौँ । त्यसमा पनि छलफल भयो । उर्जा र जलवायु परिवर्तनबारे पनि छलफल भयो ।
दोस्रो कुरा बीआरआईको विषयमा छलफल भयो । हामीहरुले त्यहाँ एउटा कुरा स्पस्टसँग राख्यौँ । उनीहरुलाई चिन्ता छ, नेपाली काँग्रेस बीआरआईमा जाँदैन कि भन्ने । तर नेपाली काँग्रेस बिआरआइमा जान्छ तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस् हामीले भन्यौँ । बीआरआई काँग्रेसकै पालमा सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा ओके गर्यौँ । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत चीन जाँदा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसपछि अन्तिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको हो । बीआरआईमा जाने कुरामा काँग्रेस एकमत छ, हामी जान्छौँ । तर बीआरआईमा गएपछि के फाइदा लिने हो भन्ने सरकारले गर्ने काम हो । हामी सरकारमा छैनौँ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय र राजश्वको हिसाब किताब गर्दा विआरआईबाट ऋण लिएर रेल बनाउने कुरामा हामी जान सक्दैनौँ । केरुङबाट काठमाडौँमा रेल ल्याउन ४–५ खर्ब आवश्यक पर्ने भन्ने छ । त्यत्रो ऋण तिर्न सक्ने हाम्रो क्षमता हुँदैन । त्यसको विकल्पमा रसुवागढी र तातोपानीमा दुई लेनको सडक रोज्नुपर्छ । दोस्रो किमाथान्का रोड र तेस्रो १ हजार मेघावाट भन्दा बढी क्षमता भएको जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । र, चौथो ट्रान्समिसन लाइन । यी चारवटा कामका लागि ऋण लिएर अगाडि बढ्यौँ भने ५ वर्षभित्र हाम्रो क्षमता बढ्छ । त्यसपछि मात्रै रेल ल्याउने कुरामा अघि बढ्न सकिन्छ ।
#डा. शेखर कोइराला#Shekhar Koirala
Oct. 5, 2019, 10:24 a.m. Indra
Agreed with BRI logic..
Oct. 4, 2019, 3:15 p.m. Raman Sharma
बिचार राम्रो हो! तर कम्युनिस्टहरु आफुले जे गरे पनि जनताले मान्नै पर्ने ठानेर मन परी गर्छन, कांग्रेसलाई गल्ति गर्ने छुट छैन भन्ने तर्फ सचेत हुनु पर्छ! बुहारीले नागरिकता पाउनु पर्थ र निश्चित प्रक्रिया पछि निश्चित अवधि पछि मात्र! नक्कली बुहारी र नक्कली ज्वाईंको बिग्बिगी सम्हाली नसक्नु हुने तर्फ ध्यान जानु पर्छ!